बेरोजगार हुनुहुन्छ ? अब मोबाइलबाटै जागिर खोज्नुहोस् - Aarthiknews
बेरोजगार हुनुहुन्छ ? अब मोबाइलबाटै जागिर खोज्नुहोस्
काठमाडौं । के तपाईं कुनै पनि रोजगारीको अवसर नपाएर हैरान हुनुहुन्छरु अब चिन्ता नगर्नुस्, आक्समी म्यानेजमेन्टले यहि माघ १५ र १६ गते दुई दिनसम्म नेपालमै पहिलो पटक भर्चुअल जब फेयर सञ्चालन गर्ने भएको छ । इन्टरनेटको बढ्दो प्रयोगसँगै मोबाइल तथा कम्प्युटरबाट नै जागिरको खोजी गराउन आक्समी कन्सल्ट डटकममा भर्चुअल जब फेयर सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।